Guddoomiyiha Xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Oo Dhaawac Fududi Soo Gaadhay | Araweelo News Network (Archive) -
Guddoomiyiha Xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Oo Dhaawac Fududi Soo Gaadhay
Hargeysa(ANN)Guddoomiyaha xisbiga talada haya ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa dhaawac fududi soo gaadhay, kadib markii uu ku kufay marmarka gurigiisa magaalada Hargeysa. Sidaana waxa shaaca ka qaaday
Xoghayaha Guud ee xisbiga KULMIYE Mr. Kayse Xasan Cige, wuxuuna sheegay shilkaasi ku dhacay Guddoomiyaha subaxnimadii maanta kadib markii uu la siibtay marmarka gurigiisa.
Qoraal kooban oo laga soo diray xarunta guud ee xisbiga talada haya oo uu ku saxeexan yahay Xoghayaha Guud ee xisbigaasi, ayaa waxa uu u qornaa sidan:
“Waxaa maanta (shalay subax) oo taariikhdu tahay 24 November 2010 abaara 07:00 subaxnimo gurigiisa dhexdiisa ku kufay Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biiixi Cabdi, isagoo uu la siibtay marmarka guriga dhexdiisa. Guddoomiyaha waxaa soo gaadhay dhaawac yar oo fudud kana soo gaadhay labada feedhood ee dhinaca midigta oo cad-gu’ay.
Guddoomiyaha caafimaadkiisu aad ayuu u fiican yahay oo hadda nasasho u joogaa gurigiisa.”
Dhinaca kale boqolaal dad ah ayaa gurigiisa ku booqday Mujaahid Muuse Biixi oo xaaladiisu aad u wanaagsan tahay, kuwaas oo uga tacsiyadeeyay shilkaa.
Dhacdadan oo kale, ayaa sannadkii hore ku dhacday Guddoomiyihii hore ee KULMIYE, haddana ah Madaxweynaha dalka Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), oo waqtigaa dhaawac fududi kasoo gaadhay Misigta, isagoo ku jimicsanaya barxada gurigiisa markii uu la siibtay Marmarka daaradu.